China Cuttable Heat Nyefee ìgwè atụrụ na-emepụta na suppliers |Alizarin
Ìgwè atụrụ na-ebufe ọkụ na-egbu egbu
Aha ngwaahịa: Atụrụ Nyefe Okpomọkụ Cuttable
Koodu ngwaahịa: CCF-Flock
50cm X 15M, 50cm X5M/ mpịakọta,
nkọwa ndị ọzọ bụ ihe achọrọ.
ndị niile na-akpa nkata igbupụ ihe, dị ka
Graphtec FC8600, CE6000, CE6000-F-Mark, CE LITE-50, Silhouette CAMEO, GCC-China RX II, Jaguar V, Puma IV, Ọkachamara II, AR-24, i-Craft wdg.
Igwe na-ebufe ọkụ Cuttable bụ igwe na-ebufe ọkụ viscose dị elu nke dabere na ihe nkiri polyvinyl chloride, nwere ọmarịcha na udidi n'ihi njupụta fiber dị elu, nke emepụtara dị ka ọkọlọtọ EN17, Cut table Flock dabere na ihe nkiri polyvinyl chloride nwere nrapado na-ekpo ọkụ na ihe nkiri polyester. ahịrị, Magburu onwe ịkpụ na weeding Njirimara.Ọbụlagodi akara ngosi zuru oke na mkpụrụedemede pere mpe na-ebipụ tebụl.Innovative na-ekpo ọkụ gbazee nrapado dabara adaba nyefee n'elu textiles dị ka owu, ngwakọta nke polyester / owu na polyester / acrylic, Nylon / Spandex wdg Cuttable Heat Nyefee ìgwè atụrụ nwere ike iji maka ibipụta na T-shirts, egwuregwu & ntụrụndụ eyi, uwe, ịnya igwe eyi na akwụkwọ nkwado.
Enwere ike iji igwe na-ebufe ọkụ cuttable maka ide akwụkwọ na T-shirts, egwuregwu & eyi ntụrụndụ, akpa egwuregwu na akụkọ nkwado.na enwere ike ebipụ ya na ndị na-akpa nkata niile ugbu a.Anyị na-adụ ọdụ ka iji mma 30°.Mgbe ahihia ahihia, a na-ebufe ihe nkiri flex ịkpụ site na ịpị ọkụ.Jiri ihe nkiri polyester nke nrapado bechapụ Flock tebụl, na-eme ka ọ nwee ike ịtụgharị ya.
∎ Hazie ákwà na eserese nwere ọtụtụ agba ọkacha mmasị.
■ Emebere ya maka nsonaazụ pụtara ìhè na akwa ojii ma ọ bụ nke na-acha ọkụ ma ọ bụ akwa ngwakọta owu/polyester
■ Enwere ike ịsacha nke ọma ma debe agba
■ Na-agbanwe agbanwe na nke na-agbanwe
Enwere ike igbutu igwe na-ebufe ọkụ site n'aka ndị na-eme atụmatụ ịkpụ osisi dịka: Roland CAMM-1 GR/GS-24, STIKA SV-15/12/8 desktọpụ, usoro Mimaki 75FX/130FX, CG-60SR/100SR/130SR, Graphtec CE6000 wdg.
5.Cutting plotter ntọala
Ị kwesịrị ị na-edozi nrụgide mma mgbe niile, na-egbutu ọsọ dịka afọ agụba gị siri dị yana mgbagwoju anya ma ọ bụ nha ederede.
Mara: Data teknụzụ dị n'elu na ndụmọdụ dabere na nnwale, mana gburugburu ebe ọrụ ndị ahịa anyị,
na-abụghị njikwa, anyị anaghị ekwe nkwa ha applicability, Tupu ojiji, Biko na mbụ zuru ule.
■ Mee ka ígwè ahụ kpoo ọkụ ruo ebe a na-edebe <ajị anụ, nke a na-atụ aro ka ikpo ọkụ dị 165°C.
∎ Ejila ọrụ uzuoku.
■ Gbaa mbọ hụ na a na-ebufe ọkụ n'otu n'otu n'akụkụ ebe niile.
∎ Iron akwụkwọ mbufe, na-etinye nrụgide dị ka o kwere mee.
■ Mgbe ị na-ebugharị ígwè, ekwesịrị inye obere nrụgide.
■ Echefula akụkụ na akụkụ.
■ Kpochapụ ihe nkiri azụ na-amalite na nkuku mgbe usoro nhazi ahụ gasịrị.
∎ Ịtọkwa igwe igwe na-ekpo ọkụ 165°C maka 15 ~ 25 sekọnd site na iji obere nrụgide.pịa kwesịrị emechi emechi.
∎ Jiri nwayọ pịa akwa ahụ 165°C maka sekọnd ise ka ị hụ na ọ dabara nke ọma.
■ Pịa igwe 165°C maka 15~25 sekọnd.
■ Kpochapụ ihe nkiri azụ na-amalite na nkuku.
Saa n'ime ime na mmiri oyi.Ejila bleaCH.Tinye n'ime igwe nkụ ma ọ bụ kwụgidere ka ọ kpọọ nkụ ozugbo.Biko agbatịla ihe onyonyo a bufee ma ọ bụ uwe T-shirt n'ihi na nke a nwere ike ime ka mgbawa na-eme, Ọ bụrụ na mgbawa ma ọ bụ wrinkling emee, biko tinye mpempe akwụkwọ mkpuchi na-acha abụba n'elu mbufe na pịa ikpo ọkụ ma ọ bụ ígwè maka sekọnd ole na ole na-agba mbọ hụ na Pịa ike na mbufe niile ọzọ.
Biko cheta ka ị ghara ígwè ozugbo n'elu ihe oyiyi ahụ.
Nke gara aga: Ihe nkiri Transparent InkJet Eco-Solvent
Osote: Ihe nkiri Eco-Solvent Ink Jet Backlit
Mbufe ọkụ Cuttable PU Flex Premium
Mbufe ọkụ Cuttable PU Flex Mmetụta
Mbufe ọkụ Cuttable PU Flex mgbe niile